Madaxweynaha Jubbaland “In maamul gobaleed kasta Albaabkiisa xirto danta ayaa ku jirto” – Kalfadhi
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa ka hadlay khilaafka dowladda Soomaaliya iyo dowlad gobaleedyada dalka oo muddo dheer soo taagnaa islamarkaana aan ilaa hadda xal laga gaarin kadib isku dayo badan fashilmay.
Axmed Maxamed Islaam, ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay doonayaan fowdo iyo khalaaso islamarkaana ay dowladda Soomaaliya diidan tahay wadahadal iyo ku dhaqanka dastuurka Soomaaliya.
“Hadii sidaan ay xaaladda tahay aniga waxaan qabaa in maamul kasta uu xirto albaabkiisa si aan looga bur burin maamulka iyo daganaantiisa amni” ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), oo warbaahinta kula hadlay Kismaayo
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in qof kasta oo reer Jubbaland ah looga baahan yahay ka qayb qaadashada daganaanta amni ee Jubbaland islamarkaana ay diidaan Musharax kasta iyo qof kasta oo daganaanta Jubbaland diidan.
“Aniga maalinna ku darsan mayo muddo xileedkayga, laakiin ma ogolaanayo in ay dhacdo doorasho aan Xor aheyn xalaalna aheyn sida ay doonayso madaxda Muqdisho” ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam Madaxweynaha Jubbaland
“Shacabka Jubbaland waxaa looga baahanyahay in ay ilaashadaan amnigooda qof kasta oo diidanna iska qabtaan” ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam.
Dowladda Soomaaliya ayuu sheegay in ay diidantahay ilaalinta dastuurka Kumeel-gaarka ah ee Soomaaliya hadii ay dhici weysana laga yaabo in dalka dib ugu laabto dagaalo Sokeeye oo khalalaasihii 30-ka soo taagnaa.
“Madaxda Dowladda Soomaaliya waxaan ka dalbanay in ay ilaaliyaan dastuurka oo ay wax ku yihiin haddii ay ilaalin waayaan, ma jirto qof ka xoog badan qof kale waxaana dib loogu laabanayaa halkii laga yimid” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Axmed Madoobe oo dadweyne kula hadlay Kismaayo.